Vikela idatha yakho nge-EncFS | Kusuka kuLinux
Esikhathini esithile esidlule Ngibakhombise ukuthi angawavikela kanjani amafolda ethu nokuqukethwe kwayo kusetshenziswa Umgcini we-Cryptkeeper, uhlelo lokusebenza esingaluthola ezinqolobaneni zokusabalalisa esikuthandayo.
Endabeni I-Arch Linux, Umgcini we-Cryptkeeper ngaphakathi I-AUR, futhi yize ngikwazi ukuyifaka angizwanga ngathi ukungeza Yaourt noma sebenzisa ukwakheka. Ngakho-ke ngacabanga: Umgcini we-Cryptkeeper Kufanele kube ukuphela kwangaphambilini kolunye uhlelo lokusebenza. Futhi ngempela, Umgcini we-Cryptkeeper ingaphambili elithuthukisiwe le- I-EncFS (Ngidla kahle kuphawula ngaleso sikhathi umsebenzisi we-mxs).
Kungani kwenziwe ngcono? Ngoba Umgcini we-Cryptkeeper ikhombisa / ifihla ifolda lapho sigcina khona okuqukethwe kwethu, okuyi I-EncFS ayenzi. Kepha singakwenza kalula.
Ngalesi sibonelo ngicabanga ukuthi sesivele sinayo ifolda ebethelwe. Imvamisa kuzoba nesikhathi ngaphambi kwegama, isibonelo Okuyimfihlo.
Manje ake sithi ngifuna ukufinyelela ifolda eyimfihlo. Into yokuqala ukufaka i- I-EncFS.
Uma sifuna ukufaka ifolda ebethelwe ngomsebenzisi wethu (futhi singasebenzisi iSudo), kufanele sifake iphakheji fuse futhi esimweni se Debian, engeza umsebenzisi wethu kulelo qembu:
Kuyathakazelisa ukuthi I-Arch Linux Akudingeki ngingeze umsebenzisi wami eqenjini fuseEqinisweni, alikho iqembu elinjalo. o_O
Manje, ukukhombisa ifolda eyimfihlo, kufanele sakhe ifolda engenalutho ukuze "sikhweze" .Kuyimfihlo kuyo. Masithi sinefolda yangasese (ngaphandle kw ichashazi ngaphambili). Ngakho-ke senza:
Ngemuva kwalokho, ukuyiqaqa, kufanele sibeke:
Futhi yilokho kuphela. Kepha njengoba singabasebenzisi abahlakaniphile, sizokwakha ama-2 alias kufayela .bashrc esizokwenzela ifolda, sisebenzise encfs futhi kamuva I-Dolphin, Nautilus noma umphathi wethu wefayela owuthandayo.
Njengoba ubona ngisebenzise izibizo i-activar y vula kepha usebenzisa noma yini oyifunayo ..
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Vikela idatha yakho nge-EncFS
Kuhle kakhulu, ngisanda kubhala ngendlela yokubethela amafayela nge-openssl, ikakhulukazi kuma-backups: ngizoyishiya lapha uma kungenzeka isebenziseke komunye umuntu: ungabethela kanjani amafayela nge-openssl
Bengivele ngiphawule ngayo ngaphambili, kepha ngiyisebenzisela okufanayo Ama-eCryptfs. Isivele ihlanganiswe ne-Linux kernel, ngakho-ke kumane nje kuyindaba yokufaka amathuluzi esikhala sokusebenzisa avela ezinqolobaneni (# pacman -S ecryptfs-utils) futhi isilungile. Kukho konke okunye kusebenza ngokufana ne-EncFs. Ungavumelanisa ngisho namafolda abethelwe ngeDropbox futhi ngaso sonke isikhathi lapho uguqula okuthile, yifayela elilungisiwe kuphela elivumelanisiwe hhayi lonke ifolda njengakwezinye izindlela. Futhi ngemuva kwezinyanga zokuvuselelwa okungapheli (ngiya onyakeni ngisebenzisa, uma bengingahambisani vele) akukaze kunginike nkinga nencane. Isimangaliso.
Siyabonga ngomnikelo wakho. Bengivivinya le cipher, ngisebenzisa ikhasi le-Arch oxhumanisa nalo. Ekupheleni kwaleli khasi kukhona ireferensi yohlelo: ecryptfs-simple. Bengibuka ikhasi lolu hlelo futhi ekuqaleni umbhali wabeka lo mbhalo:
Ngilahlekelwe yimininingwane nge-eCryptFS futhi angisakwazi ukuyincoma. Ngokwazi kwami, lokhu akubangelwa i-ecryptfs-elula. Konke ukubethela nokubethela kusingathwa yi-eCryptFS, kanye nokulahleka kwedatha ngenxa yamaphutha wokufaka / wokukhipha okuholelekile ku-eCryptFS kuphela okugcwele online.
Lokhu kungenzeka kungenxa yephutha elithile lomsebenzisi, kepha nokho kuyingozi enkulu kakhulu kwimininingwane ebalulekile. Ngibuyele ekusebenziseni i-EncFS yedatha yami. "
Ekugcineni ithi ibuyela ku-EncFS.
Yebo, ngenxa yalokhu, ngishiya ama-ecryptfs ngiqhubeke nokusebenzisa i-EncFS.
Ngicabanga ukuthi isihloko asihambisani nokuqukethwe yilokhu okuthunyelwe: "Vikela idatha yakho ngama-encfs" nangaphansi, okuwukuphela kwento echazwayo yindlela yokukhombisa ifolda ebethelwe ngaphambilini ... Kuphela njengokugxeka okwakhayo okuvela kumfundi othembekile.
Ngiyisebenzisile leyo, kepha ngabeka iphasiwedi enezinhlamvu ezingama-50 yalolu hlobo:% $ H = 2ls1Ñ34日本 @ ~… ..
, Ngisuse iphutha lami lokhiye futhi angisakwazi ukufinyelela lawo mafayela.
Hawu, kuyadabukisa ... Leyo inkinga ngokufaka amaphasiwedi anzima kangako, ukuthi singalikhohlwa (noma kulokhu ukufakwa kwenkinobho kuyasuswa) bese sikhohlwa ngamafayela.
Ngiyisebenzise isikhashana esedlule kepha ngaphoxeka
I-TuxPuck: I-Shufflepuck Cafe Clone